VONDRON’NY TIA TANINDRAZANA : Handrotsaka olom-baovao amin’ny fifidianana filoham-pirenena
Ny zoma 22 septambra lasa teo no tafatsangana tamin’ny fomba ofisialy ny vondron’ny Tia Tanindrazana ho an’ny fanarenana an’i Madagasikara na ny “front patriotique pour la reconstruction de Madagascar” (Fprm). 26 septembre 2017
Manana vina ny handrotsaka kandida tokana amin’ny fifidianana izay ho filoham- pirenena, hotanterahina amin’ny taona 2018 ho avy izao ity vovonana mpanao politika ity araka ny nambaran’ireo tompon’andraikitra fa olom-baovao tanteraka mihitsy.
Tsotra ny tanjona voizin’ny vondron’ny Tia Tanindrazana dia ny hametraka olom-baovao eo amin’ny fitondrana. Ampy izay, hoy ireo mpikambana, ny fisian’ireo mpanao politika mpamadika palitao sy tsy matimanonta tahaka ny ankamaroan’ireo mpanao politika amin’izao fotoana izao. Maro tamin’ireto farany no nigalabona tamin’ny harem- pirenena kanefa mbola mahazo avara-patana ihany eo amin’ny fitantanana ny firenena.
Manoloana izany indrindra dia tsy misy afatsy ny fahatongavan’ny olona vaovao eo amin’ny fitondrana no afaka hamaha izao olana mianjady amin’ny vahoaka Malagasy izao.
“Mila mamadika pejy vaovao ho fiarovana ny fiandrianampirenena sy ho fanarenana an’i Madagasikara ny vahoaka Malagasy”, hoy ny Fprm. Araka izany hentitra ny fanambarana nataon’ny Fprm fa olom-baovao no ilain’i Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy hanarina azy. “Mitaky olom-baovao ny fifidianana Filoham-pirenena amin’ny 2018. Olom-baovao matahotra an’Andriamanitra, vonona amin’ny fanovàna ny rafitra sy ny toe-tsaina”, hoy ny fanambaràna nataon’ireo mpikambana. Hamoaka ny firenena ao anatin’ny ngidin’ny fahantatra isan’andro no tanjon’ity vovonana ity sy ny fandatsahany olona vaovao hitantana an’i Madagasikara.
“Ny ady amin’ny fahantrana sy ny kolikoly avo lenta marina ary ny fametrahana firenena tsara tantana sady tan-dalàna, hanangana firenena vanona, manana vinam-piarahamonina matipaika amin’ny fanorenana ifotony sy ny fanarenana an’i Madagasikara”, hoy hatrany ny fanazavana voaray.
Ankoatra ireo dia manana tanjona lavitr’ezaka ho an’ny fampandrosoana an’i Madagasikara ihany koa ity vovonana mpanao politika vao nitsangana ity. Anisan’izany, ohatra, ny fanavotana ny tanindrazana iombonana amin’ny famerenana ny hasin’ny firenena sy ny firaisam-pirenena amin’ny fananganana ny Tranoben’ny Fihavanana Malagasy. Nanambara hatrany ny Fprm fa tsy izy ireo ihany no mahatsapa fa mila olom-baovao ny fitantanana an’ity firenena ity fa ny vahoaka iray manontolo mihitsy. Anisany nanampy tamin’ny fananganana an’ity vovonana mpanao politika ity ny mpandika ny fiainana ara-politika Cram.
VONDRON’NY TIA TANINDRAZANA
2017-09-26 12:50:13 par Jaovelo Flavien Flan-Jacques
VONONA FA EFA NIOMANANA ARY HANETRY TEN HO @ IZANY AHO TOMPOKO MILA SERA ILAY IZY A